स्थानीय तह निर्वाचन मतपरिणम: एमालेको अग्रता,कहाँ कहाँ को विजयी भए ? (अपडेट) - Himalayan Kangaroo
स्थानीय तह निर्वाचन मतपरिणम: एमालेको अग्रता,कहाँ कहाँ को विजयी भए ? (अपडेट)
Posted by Himalayan Kangaroo | १ जेष्ठ २०७४, सोमबार ११:१४ |
काठमाडौं । बीस वर्षपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत आइतवार सम्पन्न मतदानको मत गणना अहिले जारी छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मत गणना अहिले जारी छ । प्रारम्भिक मत गणना अनुसार काठमाडौंको मेयरमा नेकपा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यले २६ मतका साथ अग्रता लिनुभएको छ । यस्तै नेपाली काँग्रेसका राजुराज जोशीले १५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । यस्तै विवेकशील नेपालकी रञ्जु दर्शनाले १४ मत पाउनुभएको छ ।
पछिल्लो मत परिणाम अनुसार काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका– १ मा नेकपा एमालेका हर्ष महर्जनको प्यानल विजयी भएको छ । काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा वडा नं १ मा एमालेका श्रीकृष्ण श्रेष्ठ प्यानल सहित बिजयी हुनुभएको छ ।
डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा एमालेले अध्यक्षसहित पूरै प्यानल विजय हासिल गरेको छ । एमालेका अंगत राना ९२० मत प्राप्त गरि बिजयी हुनुभएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसका हुरा बुढाले ८० मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ । काइके गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा राप्रपाका कुञ्जन बुढा बिजयी हुनुभएको छ ।
स्थानीय तह निर्बाचनको मतगणना अनुसार मुस्ताङको दालोमे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजु बिष्ट बिजयी हुनुभएको छ । बिष्टले कांग्रेसका तेन्जिङ छिरिङ गुरुङ भन्दा दोब्बर बढि मत ल्याएर जीत हासिल गर्नुभएको हो । विष्टले ७ सय ५५ र गुरुङले २ सय ३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
मुस्ताङको बारह गाउँ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका –५ मा भने एमालेका राके गुरूङ विजयी हुनुभएको छ ।
स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका घनश्याम सुबेदी सहित एमालेको प्यानल बिजयी भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चि नगरपालिका वडा नम्बर १० मा वडाध्यक्ष एमालेका कृष्ण्प्रसाद चौलागाईं प्यानलसहित निर्वाचित हुनुभएको छ ।
उता मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–५ मा एमालेका विष्णुबहादुर गुरुङको एमाले प्यानल नै विजयी हुनुभएको छ ।
चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पनि एमालेको उम्मेदवार प्यानलनै विजयी भएको छ ।
यस्तै ललितपुरको महाँकाल–६ मा पनि एमालेको प्यानलनै विजयी भएको छ । उता कास्कीको मादी १ मा पनि एमालेको प्यानल नै विजयी भएको छ ।
सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिका वडा नं १ मा मानबहादुर पुन सहित एमाले प्यानल बिजयी भएको छ । सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकामा भने माओबादी केन्द्रका नवराज कार्की विजयी हुनुभएको छ । जाजरकोट बोराकोट १ मा पनि शशीराम गौतम सहित माओबादी केन्द्रको प्यानल विजयी भएको छ ।
धादिङको नेत्रवति गाउँपालिका वडा नं १ मा माओबादीका चन्द्रबहादुर मगर विजयी हुनुभएको छ भने धादिङकै थाक्रे गाउँपालिका वडा नं १ मा कांग्रेसका इन्द्रबहादुर थापा विजयी हुनुभएको छ ।
सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका १ मा माओबादीका बलराम खड्का विजयी हुनुभएको छ भने सुर्खेतको ठूलीभेरी नगरपालिका १ मा राप्रपाका बागबहादुर महतारा विजयी हुनुभएको छ । सुर्खेतको गुर्वाकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ मा लालबहादुर खाती मगरसहित एमाले प्यानलनै निर्वाचित हुनुभएको छ ।
यस्तै डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले पनि विजयको खाता खोलेको छ ।
रसुवाको पार्वतीकुण्ड ठाउँपालिका १ र उत्तरगया गाउँपालिका १ मा वडाअध्यक्षमा नयाँ शक्ति पार्टीका उम्मेदवार विजयी हुनुभएको छ ।
पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका–१ मा नयाँ शक्तिका निमा दिण्डुप तामाङ विजयी हुनु भएको छ । निमा १ सय ४६ मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको हो ।
यस्तै, उत्तरगया गाउँपालिका–१ बमबहादुर तामाङ विजयी हुनु भएको हो । उत्तरगया १ को महिला सदस्यमा पनि नयाँ शक्तिकै मञ्जु तामाङ विजयी हुनु भएको छ । मञ्जुले दुई सय ७१ मत ल्याउनु भएको छ ।
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले पनि विजयी शुरुवात गरेको छ । डोल्पाको जगतुल्ला गाउँपालिका वडा नम्बर १ को अध्यक्षमा लालबहादुर महतारा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
जुम्लाको सिजा गाउँपालिका १ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको प्यानलै विजयी भएको छ ।
जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नं २ मा पनि माओवादी केन्द्रका प्रेमवहादुर बस्नेतको प्यानल नै विजयी भएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाको १ नम्बर वडामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निर्मल तण्डुकारको प्यानलै बिजयी भएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा काँग्रेसका चिरिबाबु महर्जनले अग्रता लिइरहनुभएको छ । उहाँलाई एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले पछ्याइरहनुभएको छ ।
कास्कीको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा पनि नेकपा एमालेको प्यानल नै विजयी भएको छ ।
मादी २ मा एमालेका उम्मेदवार एक्काजंग गुरुङ तीन सय ९९ मत ल्याउँदै वडाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका भोजबहादुर गुरुङले २ सय ९६ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
यसअघि मादी गाउँपालिका १ मा पनि एमालेका वडाध्यक्ष सुरजकुमार गुरुङसहितको प्यानल विजयी भएको थियो । गुरूङको प्यानल ६१२ मत सहितसहित विजयी भएको हो । निकटतम् प्रतिद्धन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले ४ सय ५९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उता जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर ९ मा अध्यक्ष सहित कांग्रेसको प्यानल नै विजयी भएको छ ।
मनाङको दुई ठाउँमा एमालेले विजयी हासिल गरेको छ । मनाङको नेस्याङ गाउँपालिकामा एमालेले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित सबै वडामा बिजय हासिल गरेको छ ।
एमालेका कान्छा घले ६ सय २७ मत प्राप्त गरी बिजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका बिनोद गुरुङले ४ सय ६१ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै उपाध्यक्षमा एमालेकी मिंखु गुरुङले ६ सय ११ मत प्राप्त गरेर निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँका प्रतिद्धन्दी कांग्रेसकी छिरिङ ओङमा गुरुङले ५ सय ४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
मनाङकै चामे गाउँपालिकामा पनि एमालेका डम्बरबहादुर घले बिजयी हुनुभएको छ । मनाङमा एमालेले चुनाव जितेको यो पहिलो पटक हो ।
मनाङको नासुङ गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कागं्रेसका चन्द्र घले विजयी हुनुभएको छ ।
मनाङको नार्फूमा पनि नेपाली कांग्रेसले निर्विरोध जितिसकेको छ ।
काभ्रेको रोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १२ को मत गणना सम्पन्न भएको छ । त्यहाँ माओवादी केन्द्रको प्यानल नै निर्वाचित भएका छन् । कुल मत ७ सय १७ रहेकोमा माओवादी केन्द्रले ३३९ मत प्राप्त गरि निर्वाचित भएको हो । निकटतम् प्रतिद्धन्दी नेपाली काँग्रेसले २०१ मत प्राप्त गरेका छन् । १४ मत भने बदर भएको छ ।
ललितपुरको महांकाल नगरपालिका वडा नं ६ मा एमालेका वडाध्यक्ष उम्मेद्वार रामकृष्ण आचार्य ३६१ मत पाएर विजयी बन्नुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली कांग्रेसका बाबुलाल श्रेष्ठले २७३ मत पाउनुभएको छ ।
उता जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा माओवादी केन्द्रका सबै उम्मेद्वार विजयी भएका छन् । वडा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर पुनले २ सय ६९ मत पाएर विजयी हुनुभएको हो ।
वडाको सदस्यमा रामसरी राना, भद्री दमाई, कृष्ण राना र चन्द्रबहादुर पुन विजयी हुनुभएको छ ।
Previousभरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना पुन :सुरु
Nextकारागारमा झडप, सत्र जनाको मृत्यु
डाक्टरको डिग्री अनुसार शुल्क
१३ भाद्र २०७१, शुक्रबार ०६:१५